Akụkọ - Ekwuputara Nrite Nobel nke 2020 na Physiology ma ọ bụ Ọgwụ!
Na Ọktọba 5, dị ka akụkọ si bipụta na weebụsaịtị webụsaịtị nke Nobel Prize, 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine merie ndị ọka mmụta atọ jikọtara ọnụ. Dị ka akụkọ si kwuo, ndị mmeri atọ ahụ mere nchọpụta ndị na-awụ akpata oyi n'ahụ, mata nje ịba ọcha n'anya nke C, mee ka nyocha ọbara na mmepe ọgwụ ọhụrụ nwee ike, wee zọpụta ọtụtụ nde mmadụ.
Kemgbe e nyere onyinye Nobel na Physiology ma ọ bụ Medicine na 1901, e nyere 110 ugboro. Ka ọ dị ugbua, enweela mmadụ iri abụọ na itolu nke Nobel na Physiology ma ọ bụ Medicine, ma onwebeghị onye ritere nturu ugo ahụ ugboro abụọ. A na-akọ na. Onyinye nrite Nobel nke afọ a amụbawo ruo 10 nde Swedish kronor (ihe dịka RMB 7.6 nde), mmụba nke 1 nde Swedish kronor karịa 2019.
Patba ọcha n'anya C ọgwụ esịne ke ọgwụ mkpuchi
Virusdị nje C nke metụtara Nobel Prize nwere ike ibute ịba ọcha n'anya nke ịba ọcha n'anya nke C, nke a na-ezo aka dị ka ịba ọcha n'anya C. Dị ka ọnụ ọgụgụ WHO si kwuo, ihe dị ka nde mmadụ 180 n'ụwa nile na-ebute ọrịa ịba ọcha n'anya C, na enwere ihe dịka nde 3 ruo 4 nde ọhụrụ. kwa afọ. Ndị nwụrụ site na 35,000 ruo 50,000. Ihe karịrị nde mmadụ 40 na mba anyị bu nje a.
Aghọtara na oge incubation nke ịba ọcha n'anya C bụ izu 2 ruo ọnwa 6, yabụ 80% nke ndị ọrịa agaghị enwe ihe mgbaàmà ọ bụla mgbe ha buchara ọrịa ịba ọcha n'anya C, mana na nzuzo nje ahụ ka na-eme ihe ọjọọ ma jiri nwayọọ nwayọọ na-emebi imeju. Mgbe ha butere ọrịa ịba ọcha n'anya C, ihe dị ka 15% nke ndị mmadụ nwere ike ikpochapụ nje ahụ n'onwe ha, mana 85% nke nnukwu ndị ọrịa ga-aga n'ihu na ịba ọcha n'anya C. Na-enweghị ọgwụgwọ, 10% na 15% nke ndị ọrịa na-ebute ọrịa cirrhosis ihe dị ka afọ 20 mgbe ọrịa, na mmepe ọzọ nke oke cirrhosis nwere ike ibute ọdịda imeju ma ọ bụ ọrịa imeju.
Ọ bụ ezie na 60% rue 90% nke ndị ọrịa bu ọrịa HCV nwere ike ịgwọta, ụfọdụ n'ime usoro ọgwụgwọ ọhụụ na-enye ọgwụgwọ ọgwụgwọ nso 100%. N'ụzọ dị mwute, naanị ihe dịka 3% na 5% nke ndị mmadụ nwere ike ịnata ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị.
Na Jenụwarị 1 afọ a, etinyere ụdị ọhụrụ nke "National Basic Medical Insurance, Work Injury Insurance na Maternity Insurance Drug Catalog". Ọnụ ahịa ọtụtụ ọgwụ adalatala nke ukwuu. N'ime ọgwụ 70 agbakwunyere ọhụrụ, "Bingtongsha" na "Zebidah" ​​"Xia Fanning" ọgwụ atọ ịba ọcha n'anya nke C gụnyere na ndepụta mkpuchi ahụike maka oge mbụ, yana nbelata ọnụego karịrị 85%, na-ekpuchi ndị ọrịa genotype niile.
Ingchọta na onye ọrịa ahụ ka bụ nsogbu
Patba ọcha n'anya C bụ nje na-esite n'ọbara. Infectionzọ o si ebute oria a yiri nke ịba ọcha n'anya nke B. A na-ebutekarị ya site n'ọbara, inwe mmekọahụ, na nnyefe nne na nwa. Transmissionnyefe ọbara bụ ụzọ isi ebute ọrịa ịba ọcha n'anya nke C. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ebe ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ site na ọrịa na-efe efe dị ka ụkwara nta, ọrịa AIDS, na ịba niile agbadaala, ọnụ ọgụgụ ndị na-egbu ịba ọcha n'anya nke nje emeela ka omume a pụta ìhè. N'ime afọ 15 site na 2000 ruo 2015, ọnụọgụ nke ọrịa ịba ọcha n'anya nke zuru ụwa ọnụ mụbara site na 22%, na-eru 134 maka mmadụ 10,000, karịa ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ n'ihi ọrịa AIDS.
Ndị ọkachamara na-arụtụ aka na ịzobe onwe ya elu bụ otu n'ime isi sekpụ ntị na-ebute ọnụọgụ dị elu nke ọnụọgụ ọnya metụtara ọrịa ịba ọcha n'anya nke C. Ọtụtụ ndị ọrịa amaghị na ha na-arịa ọrịa. Ọrịa ịba ọcha n'anya nke C enweghị ngosipụta ahụike na mbido, nke na-eduga n'ịchọpụta oge na ngwụcha ọgwụgwọ ndị ọrịa. Achọpụtaghị ihe dị ka 80% nke ndị butere ọrịa a ruo mgbe ha mepụtara cirrhosis decompensated na cancer cancer.
Na obodo m, ọria ịba ọcha n'anya B bu nje hepatitis B na ịba ọcha n'anya nke C, nke 10% nke kansa cancer nke oria ojoo, na oria imeju nke hepatitis C bu ihe ruru 80%. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị ọrịa ịba ọcha n'anya C amalitela ọrịa cirrhosis ma ọ bụ ọrịa cancer imeju mgbe a chọpụtara ha, ụgwọ ọgwụgwọ na-arịwanye elu nke ukwuu. Karịsịa maka ndị ọrịa nwere imeju imeju afọ, ọ bụrụ na a gwọghị ha n'oge, ọnụọgụ afọ ise bụ naanị 25%. Ya mere, nyocha ngwa ngwa, nchoputa oge mbụ, na ọgwụgwọ oge mbụ dị mkpa na mgbochi na ịgwọ ọrịa ịba ọcha n'anya C.
Na nke a, ndị ọkachamara kwuru na ọ dị mkpa ịchọpụta ndị ọrịa n'oge kwesịrị ekwesị, na-enyocha ndị otu nwere nnukwu nsogbu, ma na-enyocha ndị nwere nnukwu nsogbu site na mgbasa ozi na ụlọ ọrụ ahụike. Ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-atụ aro na ndị nwere mmịnye ọbara na onyinye ọbara na 1990s na tupu, nwere omume mmekọahụ dị elu, akụkọ ihe mere eme nke ị addictionụ ọgwụ ọjọọ, na ndị ọzọ nwere nnukwu ọbara nke ikpughe ọbara kwesịrị ime “kapeeti nyocha ”maka ndị ọrịa nwere ịba ọcha n’anya C, Ọrịa AIDS na ọrịa ndị ọzọ Ekwesịrị ikpuchi ndị ezinaụlọ niile so na ya maka nyocha.